Kaddib Leroy Sané, Pep Guardiola oo si maldahan u sheegay bixitaanka xiddig kale ee ka tirsan Manchester City – Gool FM
Dajiye July 8, 2020
(Manchester) 08 Luulyo 2020. Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka dhawaajiyay suurtagalnimada uu kaga dhaqaaqi karo safka kooxda daafaca reer England ee John Stones, kaddib marka uu furmo suuqa kala iibsiga ee xagaaga maadaama uu ku guuldarreystay inuu boos ka helo safka Sky Blue.
John Stones, oo 26 jir ah, ayaa u dhaqaaqay kooxda Manchester City xagaagii 2016, isagoo kaga yimid naadiga Everton lacag dhan 55.6 million euros.
Haddaba waxay u muuqataa in Manchester City ay macsalaameyn doonto xiddig kale kaddib Leroy Sané, waxayna wararku sheegayaan in John Stones uu xiiso ka helayo kooxdiisii hore ee Everton.
Sida laga soo xigtay shabakada caalamiga ah ee “Sky Sports” Pep Guardiola ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay:
“Waxa aan aniga doonayo ayaa u fiican John Stones, dhamaadka xilli ciyaareedka waxaan ka hadli doonaa waxa dhici doono, sababtoo ah hamigeyga mararka qaar lama mid ahan rabitaanka ciyaaryahanada, ama hamiga kooxda”.
“Waan aaminsanahay iyaga, waqtigaan la joogo waxaan dareemi doonaa in lagu sii dhawaanayo bixitaanka mid kamid ah ciyaartooyda, waan u tagi doonaa waana u sheegi doonaa, arrintan ma ahan mid la xiriirta John Stones oo kaliya, balse waxay la xiriirtaa dhamaan ciyaartoyda guud ahaan”.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska John Stones ee kooxda Manchester City uu dhacayo xagaaga 2022.